Manana 'fiteny manimba' izao ny lalàm-panorenana amerikana sy ny fanambarana ny fahaleovan-tena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Manana 'fiteny manimba' izao ny lalàm-panorenana amerikana sy ny fanambarana ny fahaleovan-tena
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tsy mitsitsy ny lalàm-panorenan'i Etazonia, ny fanambarana ny fahaleovan-tena ary ny volavolan-dalàna momba ny zon'olombelona.
Ny US National Archives dia manisy marika ny Fanambarana ny fahaleovantena sy ny lalàm-panorenana amerikana miaraka amin'ny marika fampitandremana amin'ny fiteny
Ireo antontan-taratasy ara-tantara dia raisina ho toy ny “atiny mety hanimba”.
Nasaina nampahafantatra ireo mpampiasa momba ny fiheverana sy ny niandohan'ny "votoaty manimba" toy izany ireo arisiva.
Nisongadina tao amin'ny pejin-tranonkalan'ny US National Archives ireo tagy “Fanairana amin'ny fiteny mampidi-doza” mampiseho ireo kinova notarafina tamin'ny Fanambarana ny fahaleovan-tena sy ny lalàm-panorenana. Miseho amin'ny pejy miaraka amin'ny lahatsoratry ny fanitsiana folo voalohany, fantatra amin'ny anarana hoe Bill of Rights, ireo marika fampitandremana 'fiteny manimba'.
Noheverin'ny mpitsidika ny tranokala National Archives ho prank na vokatry ny fanafihana mpijirika voalohany, nefa tsy sangisangy mihitsy izany.
Ny rohy ao amin'ny laboratoarael dia mitarika any amin'ny National Archives and Records Administration (NARA) fanambarana momba ny “atiny mety hanimba”, voafaritra ho toy ny taratry ny “fanavakavaham-bolon-koditra, firaisana ara-nofo, mahay manavakavaka, diso fiheverana / misogynoir, ary hevitra sy fihetsika xenophobic” na hoe “manavakavaka na manilika ireo fomba fijery samihafa momba ny firaisana ara-nofo, ny lahy sy ny vavy, ny fivavahana ary maro hafa”, masontsivana.
Nasaina nampahafantatra ireo mpampiasa momba ny fisian'olona sy ny niandohan'ny "votoaty manimba" toy izany ny arisiva, ary manavao ny famaritana miaraka amin'ny "teny manaja kokoa" ary manao "fanoloran-tenan'ny andrim-panjakana amin'ny fahasamihafana, fitoviana, fampidirana ary fidirana amin'ny fidirana."
Tsy fantatra mazava hoe oviana ny lalàm-panorenana, ny Fanambarana ny fahaleovan-tena ary ny volavolan-dalàna momba ny zon'olombelona no voalaza fa mety hanimba. Tamin'ny volana Jolay, nandritra ny famakiana nentim-paharazana ny Fanambarana tamin'ny fitsingerenan'ny andro nananganana azy - Jolay 4, 1776 - ny Radio ho an'ny daholobe dia nanampy fanindrahindrana voalohany, nilaza fa “ny teny ao amin'ilay antontan-taratasy dia miova amin'ny fomba hafa” taorian'ny “hetsi-panoherana tamin'ny fahavaratra lasa teo ary ny fikajiana nasionaly momba ny firazanana.”
Ity dia firesahana amin'ny hetsi-panoherana Black Lives Matter izay nanomboka tamin'ny Mey 2020, taorian'ny fahafatesan'i George Floyd tao Minnesota, nomen'ny vondrona mpikatroka mafana fo amin'ny fanavakavaham-bolon-koditra amin'ny polisy sy ny rafitra sosialy sy politika amerikana iray manontolo. Ny demokraty Joe Biden sy Kamala Harris dia nanohana ireo mpanao fihetsiketsehana; tamin'ny volana aprily, taorian'ny nanamelohana ny polisy iray tao Minneapolis fa namono an'i Floyd, ny filoha Biden sy ny filoha lefitra Harris dia niarahaba ny didim-pitsarana ary nitaky fanavaozana tamin'ny anaran'ny fitsarana ara-poko.
Tao anatin'ny andiam-bitsika iray tamin'ny volana Jolay, nilaza ny NPR fa ny Fanambarana ny Fahaleovan-tena dia misy "lesoka sy fihatsarambelatsihy efa raiki-tampisaka", izay manondro manokana ny "fitenenana manavakavahana fanavakavahana amin'ireo Teratany Amerikanina" - azo inoana fa manondro ny andalana momba ny "olon-dratsy indianina tsy mamindra fo" nitaraina ireo mpanjanatany momba ny satro-boninahitra britanika.
September 10, 2021 ao amin'ny 18: 53
Reraka aho amin'ity fanoherana ny fanavakavaham-bolon-koditra ity ary mieritreritra izy ireo fa manavakavaka ny firenentsika saingy tsy izy ireo ary mieritreritra izy ireo fa afaka manavakavaka ny fotsy hoditra ary miala amin'izany dia tsy mety aho. marary aho ary reraky ny antsoina hoe mpanavakavaka noho ny tsy fanaovan-dratsy.
George Petaki hoy:
September 9, 2021 ao amin'ny 17: 11
Ireo ppl izay mitomany ireo zavatra "ratsy" rehetra ireo dia ireo izay mampiasa ireto teny ireto, tagy, teny nalaina ary ny toy izany tamin'ny fiainany andavanandro. Ireo olona malala-tànana ankavia izay "boo-hoo" dia miantsoantso "manavakavaka" amin'ny olona rehetra manodidina azy, saingy tsy mijery fitaratra ary mahita ireo "mpikomy" tena mandratra ny firenentsika ary, "ara-tantara, no" tena manavakavaka ". Jereo ny tantara dia jereo fa ny demony dia miteraka toe-javatra mahatsiravina toy izany any Etazonia.
September 8, 2021 ao amin'ny 11: 43
Rahoviana ireo "wokist" no hifoha ary hiala amin'ny fanandramana mamerina tantara? Ny fahatsiarovan-tena sy ny fanekena ireo «fandikan-dalàna» taloha dia izay ihany ary manana ny lanjany izany rehefa mamerina mijery ny lesoka taloha isika. Na izany aza, tsy fialan-tsiny amin'ny famafana ny tantara izany!